July 10, 2019 - CeleLove
July 10, 2019 Cele Love 0
ကားဆီဖြည့်နေတုန်း ကားထဲက ကလေးတွေ ဖုန်းဆော့လို့ ကားပေါက်ကွဲ ကြောက်စရာကြီးနော် … ဆီဖြည့်နေချိန် လုံးဝဖုန်းမသုံးပါနဲ့ အန္တရာယ် အရမ်း ရှိလို့ပါ …။ လက်တွေ့ ပါပဲနော် … ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာဖော်ပြထားပါတယ် …။ Unicode ကားဆီဖွညျ့နတေုနျး ကားထဲက ကလေးတှေ ဖုနျးဆော့လို့ ကားပေါကျကှဲ […]
ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်တော့မှ စိတ်မဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာ (၅) ခု စိတ်ဝင်စားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားတာဟာ ထက်မြက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်သလို စိတ်ဝင်စားဖို့၊ ရေကြီး ခွင်ကျယ်လုပ်ဖို့ မလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုကို လျစ်လျှူရှုနိုင်တာဟာလည်း ထက်မြက်ခြင်းပါပဲ။ ခုဖြော်ပပေးမှာ ကတော့ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်တော့မှ စိတ်ဝင်စားလေ့မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ (၅) ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော် … […]
ကျိုက်​မ​ရောမြို့နယ်​တွင်​ ဖခင်​အရင်းမှ သမီးဖြစ်​သူအား အကြိမ်​ကြိမ်​ အဓမ္မပြုကျင့်​သည့်​ သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုဖြစ်​ပွား ကျိုက်မရောမြို့နယ် လက်ပံကျေးရွာ ဦးဖလုံ လယ်တဲအတွင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး ကဝမြို့နယ် သက္ကလကျေးရွာမှ ​ရွှေ့​ပြောင်းလုပ်​ကိုင်​ရန်​​ရောက်​ရှိလာ​သော ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးစိန်သောင်း အသက် (၅၃)နှစ်သည် သမီးအရင်းဖြစ်သူ မတင် . . (ခ)မအိ . ၊ […]
ထိုင်းတွင် အရက်မူးပြီးအိပ်နေသော မြန်မာတစ်ဦး ကားကြိတ်ခံရကာ သေဆုံး (ရုပ်သံ) ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် ကိုကျော်သန်း မှာ အရက်မူးလွန်ပြီး ခြံတစ်ခြံ၏ရှေ့တွင် အိပ်ပျော်နေခဲ့ရာမှ ကားကြိတ်ခံခဲ့ရပြီး နေရာတင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ထိုင်းသတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြထား ပါတယ် …။ ဖြစ်စဉ်မှာ […]
“စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဒေါသ” က ၀ိတ်တက်စေနိုင်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဒေါသက ရောထွေး ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒေါသကြောင့် ၀ိတ်တတ်စေနိုင်ပြီး စိတ်ဖိစီး မူကြောင့် ၀ိတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ရင် ကြွက်သားတွေအားနည်းလာပြီး စိတ်ဖိစီးတာကြောင့် ၀မ်းဗို က်နေရာမှာ အဆီစုလာစေပါတယ်။ ဒေါသနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သကြား ၊ […]
သေကံမရောက် စက်လှေကားထဲညပ်ပါသွားတဲ့ ၂ နှစ်သားကလေးလေး (ရုပ်သံ) အသက် ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးလေးတစ်ဦး ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုက စက်လှေကား အထစ်များကြားမှာ လက်မောင်းအရင်းကနေ ညပ်နေတဲ့ စီစီတီဗီရုပ်သံဟာ တစ်ကယ့်ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစရာကောင်းပါတယ်။သနားစရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးက နာကျင်မှုကြောင့် အော်ဟစ်ငိုယိုနေတဲ့အသံဟာ ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခုလုံးက လူတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၅ […]
မုဒိမ်းသမားတွေကို အပြစ်ရှိကြောင်း တရားစီရင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဓိက သက်သေ…. ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ကထိုင်းနိုင်ငံ ခွန်ကင် ခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားရဲ့သမီး မိန်းခကလေး ကို အိမ်သာထဲခေါ်သွားပြီး … မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တဲ့ တရားခံကို ဘာအချက်တွေနဲ့တရားခံအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ခွန်ကင် ရဲမှူးက […]
မိန်းကလေးများ အထူးသတိထားကြပါ YBS ပေါ်မှာဖင်ခွဲခံလိုက်ရတာတဲ့ (Video) YBS 14 ပေါ်မှာ ဖင်ခွဲ ခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး ရုပ်သံ ဒီနေ့ ညီမ YBS (14) ပေါ်မှာ ဘောင်းဘီ ဖင်ခွဲ ခံလိုက် ရပါတယ် (ဖင်နေရာပဲ ရွေးခွဲ ခံရတာမို့ ဖင်ခွဲတယ်လို့ပဲ […]
သက္ကမိုးညိုကို အမှုဖွင့်ရသည့်အကြောင်းအရင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှင်းလင်း… နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားဟု အမည်ပေးထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသည့် မိန်းကလေးငယ် အမှုကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင် ကို ပျဉ်းမနားရဲစခန်းမှ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးပြီးနောက် ကျပ်သိန်း (၁၀၀)အာမခံ ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရ ပါတယ် …။ […]